Ciidamo Itoobiyaan ah oo la wareegay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo – XAMAR POST
Wararka xamar post ee Magalada Muqdisho ay ka heleyso Magalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ay ka baxeen Garoonka Diyaaradaha Magaaladaas.
Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo iyana ka mid ah howlgalka AMISOM ayaa lagu soo waramayaa in gebi ahaan Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo in ay la wareegeen isla markaana Ammaanka Garoonka ay xilligaan sugayaan.
Amarka Ciidamada Kenya uga baxeen Garoonka Diyaaradaha Magalada Kismaayo ayaa waxaa sida la sheegay uu kasoo baxay Saraakiisha Midowga Afrika ee Soomaaliya,waxaana warar kale oo soo baxaya ay sheegayaan in Guud ahaan Gobolka Jubbada Hoose laga saarayo Ciidamada Kenya.
Saraakiisha hoggaamineysa Ciidamada Itoobiya ee la wareegay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kulan gaar ah la qaateen Madaxweynaha Jubbaland, iyaga oo kala hadlay in Ammaanka Garoonka la wada ilaaliyo,isla markaana musharixiinta Madaxweynaha ay sinabad ah uga soo degi karaan laan soo dhaweyn karo.
Tallaabadaaan Ciidamada Itoobiya ay kula wareegeen Garoonka Diyaaradaha Kismaayo ayaa ka dambeysay, kadib markii dhawaan Garoonka Kismaayo ay ku dagaalameen Ciidamo uu wato musharax Cabdi Naasir Seeraar iyo ilaalada Garoonka,waxaana musharixiinta qaarkood ay Madaxweyne Axmed Madoobe ku eedeynayaan in uu caburin ku haayo.
Wararka kale ay Idaacadda Risaala heleyso ayaa waxaa ay sheegayaan in Saraakiisha ugu sareysa Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay Maanta tagayaan Magaalada Kismaayo, iyaga oo la kulmi doonaan Madaxweynaha Jubbaland iyo Saraakiisha Ciidamada Itoobiya.